မန္တလေး တိုင်းအတွင်း ဒုတိယ တစ်နှစ်တာကာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်မှု မရှိ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇွန် ၂၈
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်မှုမရှိသေးကြောင်း ဇွန် ၂၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မန္တလေး မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပသည့် တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ် သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
”တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်မှုမရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျေနပ်လေက်အောင်လုပ်နိုင်သလားဆိုရင် အားမရဘူး။ ဘာ လို့အားမရလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်လို့မရ တာတွေရှိနေလို့ကြောင့်ပဲ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်နေမှုများထဲတွင် ဦးစား ပေးအဖြစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ကျေး လက်မီးလင်းရေး၊ ကျေးလက်လမ်း ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ကျေးလက်ရေ ရရှိရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
”ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူတဲ့ ကာလမှာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးလုပ်တယ်။ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးပြီ။ ကျွန် တော်တို့ရရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်တော် တော်များများကို ကျေးလက်မီးလင်းရေး၊ ကျေးလက်လမ်းကောင်းမွန်ရေးနှင့် ကျေးလက်ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့တယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် တိုင်းအတွင်းပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်သုံးစွဲနိုင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြု ပေးလျက်ရှိပြီး အတည်ပြုခွင့်ပြု ပေးခဲ့သောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုငါးခုရှိခဲ့ရာ ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကိုးခုရှိခဲ့ရာ ကျပ်သန်း ပေါင်း ၂၃ ဒသမ ၁၂၉ ဘီလီယံကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ တိုင်းဒေသကြီးသို့ခွင့်ပြု ပေးခဲ့သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ၆ဝ ခုရှိခဲ့ရာ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၅၄ ခုရှိခဲ့ရာ ကျပ် သန်းပေါင်း ၄၈၇၂ ဘီလီယံကိုလည်းကောင်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ လိုဏ်ဂူအတွင်းမှ လူငယ် ၁၃ ဦး ပြန်လည် ထွက်လာနိုင်ရေး တာချီလိ?
‘ခွဲမထွက်ရ’ဟူသည့် စကားရပ် ငြိ်မ်းချမ်းရေးအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်၊ NCA နှင့် အခြေခံဥပဒေ၏ အခြေခံ??
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှရက်ဖ်၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စီရင်ချက်ချမှတ်မည်
ဘရာဇီးမှ အမေဇုန်တောထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ယူရို ၃၅ သန်းကို ဂျာမနီဖြတ်တောက်